Miteraka tsy fitovian-kevitra amin’ny ankapobeny ny lalàna mifehy ny fifandraisana. Ny fahatsapana izany indrindra no nahatonga ny ministeran’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana hametraka sehatra iray hifampidinihan’ny rehetra na ny « plateforme de dialogue ». « Antsoina …Tohiny
Halatra sy fanendahana : Nandray fepetra iraisana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny
Tsy mitsaha-mitombo ny fanendahana sy ny sinto-mahery indrindra indrindra fa ny halatra amin’ireny fananana iombonana ireny eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ny eo tratra, ny eo mipoitra ihany. Izany hoe, miseholany ny tsy fandriampahalemana eto …Tohiny
Fiarovana ny fari-dranomasina : Efa vonona i Madagasikara
Herintaona aty aoriana nametrahana ny ivontoerana iraisam-paritra momba ny fanangonam-baovao eny an-dranomasina (CRFIM) dia nanamafy ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny Praiministra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier fa tena vonona i Madagasikara amin’izay ady hatao amin’ny olana …Tohiny
Nivoitra tamin’ny filankevitry ny minisitra farany teo ny fanoloana ny fibaikoana ny Fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena eto Antananarivo (CIRGN). Araka izany, ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, indray no mitondra ny fibaikoana sy fitantanana ny CIRGN raha ny jeneraly …Tohiny